Oktoobarey Sidu Sidii Ma aha (Maqaal Xiiso Badan)
Mogadishu Axad 21 October 2012 SMC
Maansayahanka iyo Hal Abuurka Soomaalida in badan ayaa Qoraaladooda iyo Suugaantoodaba ay ku cabiran xaalado Taagan, kuwa la soo dhaafay ama imaan kara Mustaqbalka taasoo sida ay u saadaaliyaan ama ay u sheegaan ay wax u dhacaan in kastoo wixii Qeybka ah ama Binu’aadmka ka Cilan uu garan karo oo keliya Allihii Subxaana wa tacaalaha ahaa ee isagu ah karaha wax walba oo qeeybka ah.
In badan ayaa Dadka wax Naqdiya Dhaliilo aad u fara badan u jeediyeen Kooxdii Ciidamada ahayd eeTalada dalkaas boobtay sanadkii 1969kii iyagoona ku sheegay inuu ahaa Kacaan Taladii Dalka ka fara Maroorsaday Xukuumaddii Rayidka ahayd ee Doorashada ku timid.
Kacaanku sidoo kale wuxuu ku tallabsaday Sanooyinkaas Dhismayaasha Mashaariic fara badan oo ay ku jireen Dugsiyo, Waddooyin, Isbitaalo, Warshado. Beero iyo Degmooyin Cusub oo dalka laga hir geliyay, sidoo kale kacaanku wuxuu Shaqo u abuuray Boqolaal Dhallinyara ah gaar ahaana Dhallinyaradii ku Hanti beeshay Abaarihii Dalka ku dhuftay Dhallintaas oo loo jiheeyay dhinacyada wax soo saarka Kalluunka iyo qodoshada Beeraha, Barnaamijkii Karaash Borogaraam oo Dhallinyaro fara badan oo Shaqooyin ka helay barnaamijyadaas oo dhamaantooda ahaa kuwo ay ka faa’ideysteen Dhallinyaro aad u fara badan oo Soomaaliyeed.
Dagaalkii 1977kii kaddib waa bilaabashadii bur burkii Soomaaliya, hase yeeshee qormadan ma aha mid aan ku wada amaanayo oo keliya Kacaankii Oktoobar balse waa uu jiray Dhaliilo sida aan hor dhaca maqaalka aan ku sheegayba ee uu lahaa kacaanka.
Mudadii Labaatanka Sana ahayd ee uu Kacaanku jiray lama arkin Sanad keliya ee ay baaqatay Xuska 21ka Oktoobar hase yyeshee Oktoobareey sidu sidii ma aha waxa ay sawirtay in Kacaanku sidiisii hore ahayn bur burkiisiina uu soo dhawaaday taasoo ugu danbayntiina meesha ka saartay ka gadaal markii Jabhadihii gadoodsanaa ay Kursiga ka Tuureen kacaankii mudada labaatanka sana ah Talada dalka hayay.
Isku soo duuboo qormadeydan waxaa ku soo gaba gabeynayaa Soomaalidu waa in ay dib ugu noqotaa sidii ay ahayd Islaanimadii, Wanaaggii, walaalnimadii Waddaniyaddii isku duubnidii Alle ka Cabsigii markaas ayaa laga yaabaa in ay gaaraan waxa ay doonayaan oo ah Nabad, Horumar, wadajir iyo Dalkan Barwaaqadu Jiifto haddana laga wada baahan yahay dibadna looga cararayo, Ilaaheeyna waxaan ka baryayaa inuu Iimaanka noo sugo, Barwaaqada Ciideena iyo Biyaheena dhex ceegaagtana uu na Tuso… Oktobareey Sidu Sidii ma aha ayaan ku Xusayaa Maanta oo ah 21kii Oktoobar.
W/Qorey Ustaad Aadan Macalim Aadaamo